Tamarind any Thailandy " Journey-Assist - Fotoam-pahavaratra amin'ny Thailandy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Zazavavy any Thailandy
Amin'ny vanim-potoana, ny vidiny dia 80-100 baht isaky ny 1 kg. Amin'ny vanim-potoana tsy hita, dia matetika no hita ao amin'ny talantalana fitehirizana, fa tsy vaovao sy somary lafo kokoa.
Mandeha mitsingevana ny vanim-potoanan'ny siramamy. Any amin'ny faritra atsimo dia manomboka amin'ny fiandohan'ny ririnina ary mifarana amin'ny faran'ny febroary, ary raha mandroso mianavaratra ianao dia mihamandroso ihany ny vanim-potoana roa ka hatramin'ny telo volana, ary any amin'ny faritra avaratra dia afaka manomboka amin'ny faran'ny faran'ny volana febroary ary hatramin'ny farany ny volana aprily.
Ahoana ny fitahirizana tomarind
Ary ... amin'ny tomarind mamy manokana, raha manokatra ny pod ianao, dia aza gaga mahita kankana fotsy kely. Izy ireo no famantarana tsara indrindra fa manana tomarind matotra tsara tarehy ianao!
Ny habetsaky ny vitamina A amin'ny endriny dia mahatonga ny fampiasana tomarind ilaina amin'ny fahitana.
Tamarind in fanafody nentim-paharazana Thailand,
tena ilaina ny fambolena tamarisoa. Miorina amin'ny voany, ny menaka ilaina amin'ny ultra-ilaina dia namboarina avy amin'ny mpanohitra anatiny sy ivelany an'ny fahasalaman'ny olombelona.
Raha tsy izany, tsy mampidi-doza ny voankazo, fa toy ny voankazo ivelany rehetra, tokony hampidirina miandalana izy. Tsy misy olona miantehitra amin'ny tsy fandeferana ataon'ny tsirairay amin'ny singa iray hafa ao anaty tamarind.